Opera for Mac dia misy ny fidirana amin'ny Instagram ao amin'ny kinova vaovao | Avy amin'ny mac aho
Opera for Mac dia misy fidirana amin'ny Instagram ao amin'ny kinova vaovao
Toni Cortes | | Fampiharana hafa ho an'ny Mac
Fampiharana aprioriora iray tsotra toy ny a web browser indraindray tsy mahavita manatanteraka izay ilainao avy aminy, ary miafara amin'ny fametrahana hafa. Soa ihany, afaka daholo izy ireo, ary tsy misy mpitety tranonkala tonga lafatra izay manangona ireo fiasa rehetra atolotray anao.
Matetika aho mampiasa telo amin'ny Mac-ko. Safari, mazava ho azy. Manome fiarovana ahy be ilay browser Apple tera-tany. Microsoft Edge rehefa mitsidika pejy amin'ny fiteny hafa aho. Tsy nandalo ny fandikan-teny mandeha ho azy miorina amin'ny Google Translator. Mampiasa Opera ihany koa aho rehefa te hiditra tranokala sasantsasany nosakanan'ny mpandraharaha ahy. Androany Opera dia manolotra zava-baovao mahaliana amin'ny endriny vaovao: Instagram tafiditra ao amin'ny sisiny.
Opera androany dia nandefa ny kinova vaovao ho an'ny solosaina birao, Opera 68, miaraka amina zava-baovao somary hafahafa izay tsy atolotry ny mpitety tranonkala ankehitriny hafa: fidirana mivantana amin'ny Instagram.
Fanindriana ny sidebar instagram icon, azonao idirana ny fahana, ny tantara ary ny hafatra mivantana. Ny maha samy hafa an'io sy ny famoronana ankafizinao ary ny fametrahana azy ao anaty bara miaraka amina browser hafa, dia ny ahafahantsika miditra amin'ny Instagram tsy manokatra takelaka hafa, izay manome azy io na inona na inona fitsidihantsika amin'izao fotoana izao.
Opera dia tsy mpizaha tena malaza eo amin'ireo mpampiasa, fa ny marina dia manana fiasa mahaliana izy. Izaho, ohatra, dia matetika mampiasa azy io rehefa manakana ahy tsy hiditra tranokala sasantsasany ny mpandraharaha ahy. Opera dia mampiasa proxy hialana amin'ny sakana voalaza fa tsy mila mampiasa VPN.
Araka ny nomarihiko tany am-piandohana, tsy misy navigateur tonga lafatra, ary mahaliana ny fametrahana maromaro amin'izy ireo mba hanararaotra tanteraka ireo fiasa manokana atolotry ny tsirairay anao. Tsy dia betsaka koa izany: Safari, Chrome, Firefox, Edge, Opera ary Brave no tena lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampiharana hafa ho an'ny Mac » Opera for Mac dia misy fidirana amin'ny Instagram ao amin'ny kinova vaovao
Ahoana ny fomba hanovana horonantsary amin'ny endrika hafa amin'ny VLC
Apple dia namokatra zato miliara ary hamoaka izany indray amin'ny tenany